iOS 11.2.1 inoita kunge inogadzirisa matambudziko eotofocus pane iyo iPhone | IPhone nhau
iOS 11.2.1 inoita kunge inogadzirisa autofocus nyaya pane iyo iPhone
Kugadziridza kweIOS kuri kusiya zvakawanda zvekushuvira neIOS 11, apo isu tese tanga tichifunga kuti yakwana nguva yekukwesha iOS, iyo Cupertino kambani yakaguma yave kuda kuparadza rese basa rakaitwa kare. Asi Hatigone kuwana njodzi zvakadaro futi, kwaingova nemwedzi mitatu kubvira iOS 11 yaburitswa, handiti? ????
Zvichakadaro, Apple haina kuzivisa iOS 11.2.1, vhezheni yakauya kuzogadzirisa zvikanganiso zvisingatsanangurike muKeKKit. Zvisinei uye nekushamisika Zvese zvinoita senge zvinonongedza kuIOS 11.2.1 zvakare kugadzirisa bug neiyo iPhone sensors izvo zvakakanganisa iyo autofocus.
Iri dambudziko rakanyanya kukanganisa iyo iPhone X uye iPhone 8 Plus, kunyangwe hazvo zvishoma zvataurwa zvakare kuti mamwe mamodheru e iPhone anogona kunge achitamburawo zvikanganiso mune otomatiki kutarisisa, uye zvinoita sekunge munguva pfupi yapfuura maCartertino vadzidzi vanogadzirisa chinhu chimwe uye kutyora maviri, neruremekedzo rwangu kuboka iro rimwe zuva ini yakanga iri chikamu chayo. Uye pane zvakakanganiswa muzvinhu izvo zvakange zvisati zvashandurwa, semuenzaniso keyboard, kamera, HomeKit ... chii chiri kukosha? Ndozvatinoda, kuti tinzwisise zvinhu izvi.
Zvichakadaro, sezvatakataura nezuro, iOS 11.2.5 inosvika iri Beta yevagadziri. Imwe nhamba isinganzwisisike, iyo inogona zvakare kuratidza kuti isu tichave takatarisana nehukuru hwekuvandudza, asi Hapana chimwe chiri kumberi kubva muchokwadi, muActualidad iPhone isu tinogara tichiedza mabetas kukuchengeta iwe uchiziva ipapo ipapo uye isu hatina kuwana chero chinokurudzira kune iyi nyowani vhezheni. Isu hatinyatso kuziva zviri kuitwa neApple neshanduro, chatinoziva ndechekuti edhisheni dzekare dzei iPhone dzasvika padanho rekusadzoka maererano nekuita, saka isu tichafanira kufunga kuti iOS inoita kunge isiri yakasimba kana kugadzikana sezvataifungidzira ... Apple ingagadzirise zvese izvi nyonganiso? Kazhinji zvinyorwa zvaDecember naJanuary zvinowanzo kuve zvinonyanya kufadza, asi kana tikaramba tichizvimisa, tinopedzisira tazvisiira iyo iOS 12.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2.1 inoita kunge inogadzirisa autofocus nyaya pane iyo iPhone
"Kwangova nemwedzi mitatu chete" "inoita kunge inogadzirisa matambudziko"
Tinogona kurara murunyararo izvozvi, handiti? Chii chinotevera, "rave chete gore"
Ivo vakaenzana kana vakaipisisa kupfuura hurumende uye vasina kunangana nenyika, nekuti vese vakafanana
Tenga nhasi uye ugamuchire mangwana, ndiyo fomula nyowani yaApple yekutengesa kwako kweKisimusi
Dropbox Pepa inovandudzwa pamwe nekuvandudzwa kune mobile mushandisi ruzivo